चियामा हामी आत्मनिर्भर भइसक्यौंः कार्यकारी निर्देशक गौतम - Pahilo News
चियामा हामी आत्मनिर्भर भइसक्यौंः कार्यकारी निर्देशक गौतम
नेपाल चिया तथा कफी उत्पादनका लागि अनुकूल ठाउँ हो । उत्कृष्ट मौसमका कारण पहाडी भूभागमा मात्र होइन, तराई र भित्री मधेसमा समेत चिया र कफीको राम्रो उत्पादन गर्न सकिन्छ । विगत केही वर्षयता व्यावसायिक रुपमै चिया तथा कफी खेती गर्ने दिशामा किसानहरु उत्साहित देखिएका छन् । किसानहरुमा देखिएको उत्साहलाई राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले कसरी लिइरहेको छ ? बोर्डका कार्यकारी निर्देशक शेषकान्त गौतमसँग पहिलो न्युजका लागि वसन्त विश्वकर्माले गरेको कुराकानीः
नेपालमा चिया तथा कफीको उत्पादन एव विकासमा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले के–कस्ता कामहरु गरिरहेको छ ?
चियाको रोपणमा विगतको भन्दा अहिले क्षेत्रफल वृद्धि हँुदै गइरहेको छ । पहिले सीमित मात्रामा रहेको चिया खेती अहिले विस्तार भएर २६ हजार हेक्टरमा भइरहेको छ । वार्षिक रुपमा २४ हजार मेट्रिक टन चिया उत्पादन भइरहेको छ । कफी खेतीको कुरा गर्दा, हामीले राम्ररी अनुसन्धान ग¥यौं भने हामीसँग ११ लाख हेक्टर जमिनमा कफी खेती गर्न सकिन्छ । त्यति जमिनमा रोपेर, मलजल गरेर बालबच्चा हुर्काएजस्तै मिहिनेत गर्ने हो भने हामीले कफी फलाउन सक्छौं । तर, यसका लागि किसानहरुलाई हामीले प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी त्यस काममा लागिरहेका छौँ ।
चिया तथा कफी खेतीको विकास र विस्तारमा राज्यको लगानी पर्याप्त छ कि छैन ?
अहिले राज्यले प्रशस्त लगानी गरेको मान्नुपर्छ । हामीले चिया उद्योगहरुलाई अनुदान दिएका छौँ । विभिन्न सहकारीहरुलाई संघसस्थाहरुमार्फत् निजी क्षेत्रहरुबाट पनि चियाका उद्योगहरु स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरेका छौं र त्यसका निम्ति बोर्डले अनुदान दिँदै आएको छ । बिउ र नर्सरी स्थापना र व्यवस्थापनमा पनि सहयोग गरेका छौँ । विभिन्न तालिमहरु दिएका छौँ । कफीको क्षेत्रमा पनि मेसिन, औजारहरुका साथै बिरुवा र नर्सरीमा समेत सहयोग गरेका छौँ ।
कफीको विकास र विस्तारका निम्ति हामीले गएको वर्ष नर्सरी वर्ष घोषणा गरेका थियौँ । यो वर्ष हामीले कफी रोपण वर्षका रुपमा लिएका छौँ । जसमा हामीले ८ देखि १० लाख कफीका बिरुवा रोप्दै छौँ । अहिले हाम्रो साधन, स्रोत र शक्ति सबै नै कफी उत्पादनमा लगाउँदै छौँ । यस हिसाबले हामी ४ वर्षपछि कफीको दोब्बर उत्पादन गर्नेछौँ ।
तपाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त हुनुभएपछि के–के नयाँ काम गर्नुभयो त, चिया तथा कफी खेतीको विकासमा ?
मेरो नियुक्ति भएको करिब डेढ वर्ष भयो । यस अवधिमा हामीले पर्याप्त रुपमा रचनात्मक काम गरेका छौँ जस्तो लाग्छ । पहिलो कुरा बोर्डमा दक्ष जनशक्तिको अभाव थियो, त्यसलाई पूरा ग¥यौँ । जसले गर्दा बोर्डले लिएको उद्देश्य पूरा गर्न सजिलो भएको छ । दोस्रो कुरा, नेपालमा उत्पादन हुँदै आएको चियालाई भारतमा बेच्ने र उनीहरुले भारतीय चिया हो भन्दै आफ्नो ब्रान्डमा बिक्री गर्ने काम भइरहेको थियो । हाम्रो चियाको विश्व बजारमा पहिचान नै नभएको अवस्था थियो । तर, अहिले भने हामीले नेपालको छुट्टै लोगो दर्ता गरेर आफ्नो ब्रान्ड र पहिचान बनाउँदै छौ र नेपाली चियाको छुट्टै ब्रान्ड तयार गर्ने प्रक्रियामा छौँ । तेस्रो कुरा, नेपालको चिया तथा कफी विकासको रणनीति तयार पार्दैछौँ । तसर्थ, विगतमा भन्दा हामी प्रगतिशील तरिकाले अगाडि बढिरहेका छौँ ।
विश्व बजारमा नेपाली चियाको कत्तिको माग छ र नेपाली चियाको विशेषता के हो भन्ने ठान्नु हुन्छ ?
अहिले नेपालमा दुई किसिमका चिया उत्पादन भइरहेको छ । एउटा सिटिसी चिया हो, जुन झापा जिल्लामा मात्रै उत्पादन हुन्छ । अर्को अर्थोडक्ट चिया हो, जुन पहाडी जिल्लामा उत्पादन हुन्छ । तुलनात्मक रुपमा सिटिसी चिया बढी उत्पादन हुन्छ । जसको बजार भारत नै हो । सिटिसी चियालाई हामी भारतमा बिक्री गर्छौं र उनीहरुले भारतीय चिया भन्दै बाहिर पठाउँछन् । यसमा हामीले हाम्रो पहिचान नै दिन सकेका छैनौँ । अर्थोडक्ट चिया चाहिँ अहिले क्यानडा, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र जर्मनीमा ठूलो मात्रामा जाने र बिक्री हुँदै आइरहेको छ ।
हामीकहाँ उत्पादित चियाको विशेषता भनेको के हो भने, पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन हुन्छ र पूरै अर्गानिक र गुणस्तरीय समेत छ । त्यही कारण अन्य देशहरुमा माग बढ्दो छ । हामीले बजार विस्तारको योजना पनि बनाइरहेका छौँ । हामीले चियाको गुणस्तर बढाउन र मूल्यमा बार्गेनिङ गरौँ भनेर किसानहरुलाई सचेत गराइरहेका छौँ । अन्य कुरामा हामी परनिर्भर छौँ तर चियामा भन हामी आत्मनिर्भर छौँ र चिया तथा कफीको बजार विस्तारका लागि थप योजनासमेत बनाउँदै छौँ ।
चिया तथा कफी किसानहरु उत्पादनमा कत्तिको उत्साहित पाउनुभएको छ र बोर्डले चाहिँ कत्तिको सहयोग गरिरहेको छ ?
हामीले किसानहरुलाई भ्याएसम्मको सहयोग गरिरहेका छौँ । बजार विस्तार सचेतना, प्रविधि हस्तान्तरण, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगहरु उपलब्ध गराइरहेका छौँ । कुनै पनि किसानलाई केही कुराको अभावले उत्पादनमा समस्या भयो भन्ने कुरा आएको छैन । यदि त्यस्तो भएमा हामीसँग सम्पर्कमा आउन अपिल गर्ने गरेका छौँ । खासगरी, चिया उत्पादन ठूलो क्षेत्रफलमा गर्नका लागि निजी क्षेत्रको लगानी हुन आवश्यक छ । जसका लागि हामी सहयोग गर्न तयार छौँ ।
बोर्डको आगामी योजना के रहेको छ ?
पहिलो कुरा, हामी चियाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा नै जोड दिने छौँ । बजारमा गुणस्तरीय चिया जाओस् र किसानले उचित मूल्य पाओस् भन्नेमा छौँ हामी । कफिको क्षेत्रमा उत्पादन कसरी बढाउने भन्नेमा जोड दिने छौँ । यी दुई कुरामा बोर्डको सम्पूर्ण गतिविधि केन्द्रित हुनेछ ।